India Oo soo Saaray Kabo Dumarka ka Caawinaya Inaan la Kufsanin.(Sawirro) | Awdalmedia.com
India Oo soo Saaray Kabo Dumarka ka Caawinaya Inaan la Kufsanin.(Sawirro)
Dalka India waa mid ka mid ah meelaha ugu daran caalamka ee kufsiga maaro loo waayey, iyadoo maalin kasta warbaahinta dalkaas ay ka sheekeyso kiisas kufsi la xiriira oo ka dhacay meelo ka mid ah dalkaas.
Haddaba Arday 18 jir ah oo u dhashay dalkaas ayaa go’aansaday inuu caawiyo dumarka dalkiisa, isagoo u sameeyey kabo Electronic ah ama koronto ku shaqeeya kuwaasoo uu sheegay inay si weyn u caawin doonaan.
Siddharth Mandala ayaa sameeyey kabahaan oo uu ugu magac daray ElectroShoe kuwaasoo uu sheegay inay yihiin nooc loo naqshadeeyey inay dumarka ka caawiyaan inaan la kufsan.
Kabahaan ayaa waxaa ku xiray beteri, sidoo kalena waxay leeyihiin gambaleel cod dheer oo booliiska ugu yeeraya goobta markaas gabadha lagu weeraray. Sidoo kale waxaa ku xiran GBS tilmaan ka bixinaya halka uu ka dhacayo kufsiga.
Sidoo kale kabahan ayaa gabadha ka caawinaya inay si xowli ah uga cararto ragga markaas doonaya inay kufsadaan.
Kabahaan ElectroShoe ayaana dhowaan suuqa la soo dhigi doonaa, wiilkaan sameeyey ayaana daaha ka qaaday inuu ku dhowaad 20 jeer ku guuldarreystay isku daygiisa uu kabahan ku soo saarayey balse uusan ka quusan taasoo ugu dambeyn u suuragelisay inuu soo saaro.